टोक्यो अगस्तमा मौसम! तापमान, वर्षा, कपडा - Best of Japan
मान्छेहरू, अधिकतर युवाहरू, हाराजुकू रेलवे स्टेशनको नजिक तक्शिता डोरी हुँदै हिड्छन्। Takeshita डोरी आधुनिक जापान को फेसन प्रवृत्ति हो = शटरस्टक
जापानमा अगस्ट! टाइफुनमा ध्यान दिनुहोस्! >
टोकियो मा, यो अगस्त मा धेरै तातो छ। होक्काइडो जस्तो नभई टोकियोमा आर्द्रता धेरै नै छ। त्यसोभए, यदि तपाईं अगस्तमा टोकियो भ्रमण गर्नुहुन्छ भने, हावा गर्मीको कपडा ल्याउनुहोस्। एयर कन्डिसनहरू भवनमा सुनिरहेझैं, तपाईंलाई पनि ज्याकेट चाहिन्छ। अगस्टमा, आँधीले टोकियोमा आक्रमण गर्न सक्दछ। भर्खरको मौसम पूर्वानुमानसँग सावधान हुनुहोस्। यस पृष्ठमा, म अगस्तमा टोकियोको मौसम प्रस्तुत गर्नेछु। मैले यस समयमा लिइएको फोटोहरूको पनि पोष्ट गरें, कृपया सन्दर्भ गर्नुहोस्।
तल टोकियोमा मासिक मौसमको बारेमा लेखहरू छन्। तपाईको बारेमा अधिक जान्न चाहानु भएको महिना चयन गर्न स्लाइडर प्रयोग गर्नुहोस्।
तल अगस्तमा ओसाका र होक्काइडोको मौसमका बारे लेखहरू छन्। यदि तपाईं होक्काइडो साथ साथै टोकियो जाने योजनामा ​​हुनुहुन्छ भने, कृपया नोट गर्नुहोस् कि होक्काइडोको मौसम टोकियो भन्दा बिलकुलै फरक छ।
गर्मीको कपडाका लागि, कृपया निम्न लेखमा सन्दर्भ गर्नुहोस्।
यदि तपाई ग्रीष्म Japanतुमा जापान जाँदै हुनुहुन्छ भने कस्तो किसिमको कपडा लगाउनु पर्छ? जापानको ग्रीष्म trतु क्षेत्रहरु जस्तै चर्को छ। आर्द्रता पनि उच्च छ। तसर्थ गर्मी को लागी तपाइँ चिसो छोटो बाहुला कपडा तयार गर्न सक्नुहुन्छ जुन गर्मीबाट बच्न सजिलो छ। यद्यपि, ...
टोक्योमा अगस्टमा मौसम (अवलोकन)
टोकियो मौसम अगस्तको सुरूमा (२०१))
टोक्यो मौसम अगस्त (२०१)) को बीचमा
टोक्यो मौसम पछिल्लो अगस्ट (२०१ 2018) मा
ग्राफ: अगस्त मा टोकियो मा तापमान परिवर्तन
टोकियोमा अगस्टमा दिनको अवधिमा अधिकतम तापमान लगभग हरेक दिन degrees० डिग्री सेल्सियस भन्दा बढी छ। हालसालै यो 30 35 डिग्री पार गरी करीव 40० डिग्री पुगेको छ। आर्द्रता पनि उच्च छ। यदि यो सुख्खा छ भने, मलाई लाग्छ कि यो खर्च गर्न अझै सजिलो छ, तर यो उच्च आर्द्रता भएको कारण यो तपाईं गतिशील छैन भने पनि असहज हुनेछ।
म धेरै मानिसहरूलाई जापान भ्रमण गर्न चाहन्छु भन्ने दृढ इच्छा गर्दछु। त्यसो भए, मैले यो साइट सुरू गरें। यद्यपि, मँ चाहन्छु कि तपाईं असहज महसुस गर्नुहुन्न, म जोड दिन हिम्मत गर्दछु। यो अगस्टमा धेरै तातो छ।
यदि तपाईं अगस्तमा टोकियो जानुहुन्छ भने, म तीन चीजहरू सिफारिस गर्दछु। सर्वप्रथम, टोकियो जस्ता तातो ठाउँहरूमा, अत्यधिक भीडभाड तालिकाका साथ वरिपरि नजाउनुहोस्। कृपया सावधान रहनुहोस् तपाईको शारीरिक शक्तिलाई नढकाउन। समय समयमा, कृपया एक ठाउँमा विश्राम लिनुहोस् जहाँ एयर कन्डिशनर प्रभावकारी थियो र ओसिलोता पुन: भर्नुहोस्।
दोस्रो, म तपाईंलाई सिफारिश गर्दछु कि तपाईं तुलनात्मक रूपमा सुन्दर बिहान र साँझ र पछि लाभ लिनुहोस्। म तपाईंलाई सिफारिश गर्दछु कि पर्यटकीय स्थलहरूमा जानुहोस् जहाँ वातानुकूलन सबैभन्दा तातो समयमा काम गर्‍यो।
जापानमा धेरै पहिलेदेखि "yuu-suzumi" शब्द छ। यसको मतलब कूलरको साँझ बाहिर हुने। साँझ र सूर्यास्तको समयमा "युयू-सुजुमी" मा रमाईलो गरौं (past बेलुका)
तेस्रो, म तपाईंलाई सिफारिस गर्दछु कि तपाई तुलनात्मक रूपमा चिसो क्षेत्रहरू जस्तै: होक्काइडो र होन्शुको उच्च इलाकाहरूमा अगस्तमा टोकियोको अतिरिक्त। टोकियोको साथ जोड्नुहोस् र राम्रो सम्झनाहरू बनाउनुहोस्!
त्यहाँ जोखिम छ कि एक आँधीले अगस्टमा टोकियोमा प्रहार गर्नेछ। त्यसोभए पछिल्लो मौसमको पूर्वानुमान जाँच गर्नुहोस्। यदि टाइफून आउँदैछ जब तपाईं टोकियोमा बस्नुहुन्छ, व्यस्त तालिकामा यात्रा नगर्न होशियार हुनुहोस्।
तल, म जापान मौसम विज्ञान एजेन्सीले घोषणा गरेको मौसम डाटा प्रस्तुत गर्नेछु।
अधिकतम तापमान (सेल्सियस) 37.3
न्यूनतम वायु तापमान 20.8
कुल वर्षा 49.5 मिमी
4 अगस्त २०१:: सेन्से-जी मन्दिर, टोक्यो, जापान। सेन्से-जी एक प्राचीन बौद्ध मन्दिर हो जुन असकुसा = शटरस्टकमा अवस्थित छ
टोकियोमा, वर्षको तातो दिनहरू जुलाईको देखि अगस्टको सुरूसम्म जारी रहन्छ। हालसालै, दिनको अधिकतम तापमान 40० डिग्री सेल्सियसको नजीक हुन सक्छ। रातको तापक्रम पनि राम्रोसँग कम हुँदैन। टोकियोमा हामी एयर कन्डिसन बिना रातमा सुत्दैनौं।
यस समय, कृपया लगत्तै पानी आदि पिनुहोस्।
अगस्टमा, टोकियोमा सूर्योदय समय लगभग approximately:4१ हुन्छ, र सूर्यास्त समय लगभग १ 51::18२ हुन्छ।
अधिकतम तापमान (सेल्सियस) 34.1
न्यूनतम वायु तापमान 18.3
कुल वर्षा 11.0 मिमी
राम्रो मौसम अनुपात 52%
अगस्त १ TH था, २०१.। युवा जापानी केटीहरूले टोकियोको सडकमा पारंपरिक युकाटा लगाएको = शटरस्टक
अगस्टको मध्यमा, टोकियोमा तातो दिनहरू जारी रहन्छ। हरेक वर्ष, धेरै जापानीहरू अगस्ट १ 13-१ around को आसपास ग्रीष्मकालीन बिदा लिन्छन् र चिहानको लागि आफ्नो गृहनगर फर्कन्छन्। तसर्थ, Shinkansen र विमानहरु धेरै भीड छन्, त्यसैले छिटो बुक गर्न निश्चित गर्नुहोस्।
मध्य अगस्तमा, टोकियोमा सूर्योदय समय करीव 4::59 18 र सूर्यास्त समय लगभग १:31::XNUMX१ हुन्छ।
अधिकतम तापमान (सेल्सियस) 36.0
न्यूनतम वायु तापमान 23.5
कुल वर्षा 26.0 मिमी
राम्रो मौसम अनुपात 56%
AUG 25: टोक्यो, जापानमा Asakusa sama कार्निवलमा भाग लिनेहरू = शटरस्टक
अगस्टको अन्तसम्ममा, टोकियोमा दिनको अधिकतम तापक्रम थोरै कम हुनेछ। यो थोरै मात्र हो। बिहान र साँझको कम तापमान पनि केही हदसम्म कम गरिएको छ। हामी केही शरद bitतु महसुस गर्छौं।
अगस्टको अन्तमा, टोकियोमा सूर्योदय समय करीव :5:०07 हुन्छ, र सूर्यास्त समय लगभग १ 18: १। हुन्छ।
※ सूर्योदय र सूर्यास्त समयहरू जापानको नेशनल एस्ट्रोनोमिकल वेधशाला द्वारा जारी गरिएको २०१ data डाटामा आधारित छन्। मैले अगस्टको सुरूका लागि 2019th औं समय, अगस्तको मध्यमा १5औं समय, र अगस्तको अन्त्यको लागि २th औं समय पोस्ट गरें।
>> जापानमा ग्रीष्म earतु! तपाईंले के लगाउनु पर्छ?
"अगस्ट" मा फिर्ता